KIA နှင့် အစိုးရတပ်အကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ဆဲ | ဧရာဝတီ
သန်းထိုက်ဦး| December 3, 2012 | Hits:449
3 | | ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းတခုကို ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
“ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နဲ့ ၂ ရက် ပန်ဝါဒေသမှာ တိုက်ပွဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်။ တပ်ရင်းကတော့ ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခလရ) ၇၇ နဲ့ ၇၄ တပ်ရင်း ၂ ခုပေါင်း တပ်ဖွဲ့နဲ့ ၂ ရက်လောက် တနေကုန် တိုက်ပွဲဖြစ်တာ ရှိတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website KHINE ZAR THWE December 5, 2012 - 10:26 am	နောက်ခံမရှိတဲ့ ဗိုလ်မှူး ၊ ဗိုလ်ကြီးနဲ. စစ်သားတွေ သတိထားကြ ကချင်ရောက်မယ်
Reply	Thiha Kyaw Aung December 10, 2012 - 3:14 pm	သိပ် မှန် တယ် စစ် တပ် မှာ တ သက် လုံး ဒီ လို ပဲ သွား နေ မှာ ပဲ